Imoto engenamabhulashi: okufanele ukwazi mayelana nalezi zimoto | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Imoto engenamabhulashi: okufanele ukwazi ngalezi zimoto
Isaka | | Izingxenye ze-elekthronikhi, drones
Cishe uke wezwa nge i-motor brushless. Kujwayelekile ukubona leli gama ezincazelweni eziningi zomkhiqizo. Isibonelo, ku drones uyabona ukuthi abaningi banalolu hlobo lwama-motors kagesi. Eqinisweni, abanye abakhiqizi bayayisebenzisa njengesicelo samakhasimende angaba khona, njengoba enezinzuzo zawo.
Kodwa yini le moto engenamabhulashi? Yini umehluko okhona maqondana ne- ezinye izinhlobo zama-DC motors. Kahle bonke labo ukungabaza nokuningi ngizozama ukubacacisa kule ndatshana ...
Njengakwezinye izinhlobo ze Izingxenye ze-elekthronikhi, lawa ma-motors angahlanganiswa ngaphandle komthungo namaphrojekthi wakho we-DIY nge ibhodi le-arduino nabanye
1 Yini imoto engenamabhulashi?
1.1 Izingxenye zemoto engenamabhulashi nokusebenza
2 Ungayithenga kuphi imoto engenamabhulashi
Yini imoto engenamabhulashi?
Izingxenye Brushless motor
Ukushintshwa kwamabhulashi ama-motor abhulashiwe
Un i-brushless motor, noma i-brushless motor, Kuyinto evamile futhi yamanje yamandla kagesi, kodwa ayisebenzisi amabhulashi ukushintsha ubukhulu bezimoto. Lokhu kugwema izinkinga ezithile zobuchwepheshe futhi kuzivimbele ekutheni zingashintshwa. Yingakho isetshenziswa njengesimangalo, yize kuliqiniso ukuthi isimangalo esithile esingaqondakali, ngoba ama-motors amaningi amanje awanamabhulashi.
I-Los ama-motors amadala kagesi Yebo babejwayele ukuba nalolu hlobo lwamabhulashi, ezinye izinto ezihlikihla futhi ngakho-ke zinciphise ukusebenza kwemoto ngokungqubuzana, zikhiqize ukushisa okuphezulu, ukugqoka, umsindo, futhi zidinga ukuthi lokhu kulungiswa kudingeke ukuthi kuhlanzwe uthuli lekhabhoni olwenziwe ngaphakathi kwemoto (okuyinto ayikwazi ukuvimbela ukusebenza kuphela, futhi ingaqhuba futhi iholele ezinkingeni zikagesi) futhi ithathe indawo yamabhulashi agugile.
Kungakho izinjini zokuqala ezingenamabhulashi zakhiwa. Okokuqala emkhakheni we ama-AC motors asynchronous, futhi kamuva senze i-leap kwamanye ama-motors afana ne-DC, okuyilawo asithandayo kakhulu kule blog.
Yize ekuqaleni zazinoveli futhi zibiza kakhulu ukukhiqiza, ukuthuthuka kobuchwepheshe kanye ne-elekthronikhi kwenze manje kwaba nokwenzeka ukukhiqiza ngokomnotho. Noma kunjalo, ukulawulwa kwayo kungaba yinkimbinkimbi ngandlela thile. Yize abalawuli bejubane be-ESC bezisusile lezi zinkinga ...
Njengamanje, ama-AC motors akhona ku- uquqaba lwamaqembu zasekhaya nezimboni, kanye nezimoto, njll. Ngokuqondene neCC, ungabathola futhi kubafundi be-optical disc, abalandeli bekhompyutha, ama-drones, amarobhothi, nokunye okude.
Izingxenye zemoto engenamabhulashi nokusebenza
Iqiniso yilokho izingxenye yemoto engashayeki ilula impela. Nge-stator enezihlangu zamagnetic ezichazwe endatshaneni yama-motors kagesi, kanye ne-Rotor ezophenduka ngenxa yomfutho wensimu kazibuthe.
Kodwa indlela yokuzisebenzisa yebo yehluke kancane kwamanye ama-motors we-DC kanye ne-AC. Kodwa-ke, imigomo eminingi yokusebenza nezici kuzofana.
Ukwenza izinto zibe lula, i- ESC (I-Electronic Speed ​​Controller), okungukuthi, abalawuli bakwazi ukushintsha ubumbano bokushayiswa kwemoto engenasibindi ukulawula ukujikeleza. Bavumela ukulawulwa okulula nge I-PWM, ngama-microcontroller afana nalawa asebhodini le-Arduino.
Amamojula we-ESC anezinto ze-elekthronikhi ezikwazi ukusebenza kumoto ngaphandle kokubanga inkinga enkulu kumsebenzisi. Ngokuya ngohlobo lwenjini namandla uzodinga uhlobo olulodwa noma olunye lwe Umshayeli, njengoba sesike sahlaziya kwezinye izihloko.
Khumbula ukuthi ungasebenzisa ngisho Abashintshi be-MOSFET ukuyinakekela uma ungenayo imodyuli yalezi. Ngokuyinhloko umshayeli noma i-ESC yisifunda esivumela ukuthi kushintshwe ubumbano bama-transistor ukushintsha ukuphakama kwamandla okuphakelwa kwemoto kubonga kuma-transistor ayibumbayo.
phakathi izinzuzo okuvelele kwezimoto ezingenamabhulashi:
Isilinganiso se-torque engcono. Ngakho-ke, ungakhipha ukusebenza okuningi kubo.
Impendulo enamandla enamandla.
Ukusebenza kahle kwamandla amaningi, ukonga amandla. Kubaluleke kakhulu kumadivayisi anikwe amandla ibhethri.
Ukushisa okuncane. Akunasidingo sezinhlelo ezengeziwe zokushabalalisa noma ukugqoka ngokweqile.
Ihlala isikhathi eside ngokwengeziwe, ngoba ayidingi ukunakekelwa okungaka, futhi ayinayo ingxabano noma ukugqoka.
Umsindo omncane. Bathule kakhulu ngokungathinti lutho.
Ijubane eliphakeme, elilungele ukufaka izicelo lapho libaluleke khona, njengama-drones wokugijima.
Ihlangene Naphezu kwe-torque abanayo, zihlangene kakhulu zonke izinto zilingana nemoto ebhulashiwe.
Ngaphandle kwesondlo. Ngeke ube nezitobhi ezingafanele ngenxa yokugqoka amabhulashi, futhi ngeke kudingeke uthenge izingxenye ezisele, uhlanze uthuli olwenziwe, njll.
Vele, ama-motor angenamabhulashi awalungile kuyo yonke into. Banabo abancane babo ukungalungi:
Izindleko, ziphakeme kancane kune-brush motors. Kodwa-ke, ubuchwepheshe bamanje busho ukuthi ungathenga imoto engenamabhulashi ngamanani amahle.
Ukuyilawula uzodinga abashayeli noma abalawuli ukuze ukwazi ukulawula ukujikeleza. Akunakwenzeka ukukwenza ngesandla njengakwamanye amacala.
Ngaphandle kwalokho, yiboe zibeke imboni futhi kwenza kukufanele ukukhetha eyodwa yazo ...
Ungayithenga kuphi imoto engenamabhulashi
Okokugcina, uma ufuna thenga imoto engenamabhulashi ukulungisa i-drone yakho, noma iphrojekthi yakho yomenzi, ungazithola ezitolo ezikhethekile noma e-Amazon. Isibonelo, nayi eminye imikhiqizo:
Ayikho imikhiqizo etholakele.
Ama-4x ama-Brushless motors we-DroneAcc drones
I-Viviance Brushless Motor ye-Skateboard / Electric Bike
I-Alomejor Brushless motor yebhayisikili ye-skateboard / kagesi
12v 150w imoto engenamabhulashi
I-Crazepony-UK Brushless engenamanzi
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Izingxenye ze-elekthronikhi » Imoto engenamabhulashi: okufanele ukwazi ngalezi zimoto
Faston: konke odinga ukukwazi ngalezi zinto
I-NVIDIA Jetson Nano: I-SBC yokuthuthukiswa ngamanethiwekhi we-neural ne-AI
Thola izindatshana zakamuva ku-Hardware.